Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > ရန်ကုန်နှင့် တူရင်မြို့တို့ကို ညီအမမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်စီစဉ်
ရန်ကုန်နှင့် တူရင်မြို့တို့ကို ညီအမမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်စီစဉ်	ခင်မျိုးသွယ်	| ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၇ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့နှင့် အီတလီနိုင်ငံရှိ တူရင် Turin (ခေါ်) တိုရီနို Torino မြို့တို့ကို ညီအမမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ဆက်သွယ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။ယင်းအတွက် အီတလီ ဝန်ကြီးချုပ် H.E.Mr.Mario Monti နှင့် မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ နိုင်ဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ National Convention Centre ၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။တူရင်မြို့မှာ အီတလီမြောက်ပိုင်းရှိ စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဓိကရမြို့ကြီးဖြစ်ပြီး အီတလီနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အင်အားအရ တတိယ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ FIAT မော်တော်ကား စက်ရုံဌာနချုပ်ဖြစ်သလို Juventus F.C. နှင့် Torino F.C. ဘောလုံးအသင်းတို့၏ မြို့ကြီးလည်းဖြစ်သည်။နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံစဉ် ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ၂ဝ၁၃-၁၄ ခုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များတွင်မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးစားပေး ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့် အီတာလျံရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေး ကုမ္မဏီအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် OECD က ချမှတ်ထားသည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အချက်အပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အားပေးရေးတို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။ထို့အပြင် ဥရောပသမဂ္ဂက ချမှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုအားလုံးကို အမြန်ဆုံး ပယ်ဖျက်ပေးရန်နှင့် GSP အခွင့်အရေးကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရေး၊ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများကို တိုးမြှင့်ပေးအပ်သွားရေး တို့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။အီတလီနိုင်ငံသို့ပေးဆပ်ရန် ကျန်ရှိသည့် ချေးငွေများ ပယ်ဖျက်နိုင်ရန် ယခုနှစ်အတွင်း သဘောတူညီချက် လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရေးနှင့် သက်သာသော ချေးငွေများ ထပ်မံ ပေးအပ်သွားရေး၊ ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေရှိ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရာတွင် လိုအပ်သည့် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သင်တန်းနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်ရေးနှင့် ပံ့ပိုးကူညီရေးတို့ကို နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်ကွန်ဒို ငှားလိုသူ များ၊ ငှားပေးနိုင်သူ နည်း၊ ဈေးကွက် ဆက်ရှိ	ရန်ကုန် ကွန်ဒို တိုက်ခန်း ဈေးကွက် ထိပ်ဆုံး ရောက်လာ	ရန်ကုန်မြို့ ၃၈ လမ်း တိုက်ခန်းမီးလောင်မှု တစ်ဦးသေဆုံး	ရန်ကုန်-ဒလ ကူးတို့သင်္ဘောသစ်များအတွက် ငွေနှင့် နည်းပညာ ဂျပန်ကူမည်	မြန်မာ့ မီးရထား ကျူးကျော်အိမ် ၁၃ လုံး ဖျက်သိမ်း	ရန်ကုန်လွှတ်တော်တွင်း မွန်ကိုယ်စားလှယ်ရရေး စတင်ကြိုးပမ်း	တရုတ်ထံ ရောင်းပြီး လျှပ်စစ် ပြန်ဝယ်မည်ဟု ရန်ကုန် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဆို	Who is Online